Hery Rajaonarimampianina : « Nisy ny fifanarahana matoa tafajoro ny governemanta » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Nisy ny fifanarahana matoa tafajoro ny governemanta »
Mazava ny an’ny Filoham-pirenena rehefa nanontaniana mahakasika ny fisiana na tsia ilay fifanarahana politika izay mahatonga resa-be tato ho ato. Nambarany mazava nanoloana ny mpanao gazety omaly, fa matoa tafajoro sy tafatsangana ny governemanta dia nisy ny fifanarahana politika teo amin’ireo mpisehatra.
Notsindrian’ny Filohan’ny Repoblika hatrany fa nisy ny fifanarahana politika nahafahana nanendry ny praiminisitra ary nahafahana nanangana ny governemantan’ny marimaritra iraisana. “Samy nanaiky avokoa ny rehetra matoa vita sonia ny fifanarahana politika ka nahafahana nanangana ny governemanta. Governemanta amin’ny fiaraha-mitantana no natsangana”, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
Ankoatra izay, notsindriany hatrany fa mila filaminana sy fitoniana ny vahoaka sy ny firenena. Tsy afaka ny hampandroso ny firenena isika hoy izy, raha tsy misy ny fitoniana. Antom-pijoroan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana, raha ny voalazany hatrany ny hampisy fitoniana sy filaminana mba ahatongavana any amin’ny fifidianana madio sy eken’ny rehetra ary fifidianana demokratika.
Etsy andaniny, nambaran’ny Filoham-pirenena fa mila fandrosoana ny firenena, ary mila fandrosoana ihany koa ny vahoaka. Voalaza fa miasa ho amin’izany fampandrosoana izany mihitsy ny tenany fa tsy araka ny filazan’ny sasany azy. “Miasa ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena ny Filohan’ny Repoblika fa tsy araka ilay lainga afafy etsy sy eroa akory. Mijoro ho amin’izany fampandrosoana izany hatrany. Maro ireo tetikasa tafiditra indrindra amin’ny vinan’ny Filoham-pirenena ao anatin’ilay “Fisandratana”, ary ny hanatanteraka izany no tanjontsika”, hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.